Nexus 4 Android 4.4 KitKat Yimid - Marka Waxa ay noqon doontaa Diyaar Nexus 7
> Resource > Android > Nexus 4 Android 4.4 KitKat Yimid - Marka Waxa ay noqon doontaa Diyaar Nexus 7?
Kaliya u Nexus 4!
Horaantii bishan, Google sii daayay ay Android 4.4 update KitKat. Marka hore, waxa la geeyey on Nexus 5, casriga ah Nexus cusub Google ayaa sii daayay dhowr todobaad ka hor. Markaas Google ku dhawaaqday in Android 4.4 KitKat lagu diidanaa doono in qalab kale oo dhowr ah, Nexus 4 iyo Nexus 7 ka mid ah.
Ka dib markii in, qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala ay sugayaan oo yaabban ku saabsan Over-the-Air cusboonaynta. Update ayaa si Nexus 4 dambeyntii shalay soo gaaray, laakiin illaa iyo hadda, wali update news lahayn in ay Nexus 7 isticmaala. Sida muuqata, waxa uu careysiisay dadka isticmaala ay.
Waa maxay sababta aan Nexus 7?
Si ka duwan warsiinta macruufka, Android waxaa loo isticmaalaa si baaxad weyn oo ku saabsan noocyada kala duwan ah oo lagu daydo ee casriga ah iyo kiniiniyada. Ma ahan wax fudud in soo rogo iyo ku dhufan doonto qof walba oo isku mar ah, laakiin laba toddobaad waa muddo dheer ku filan. Ugu yaraan, milkiilayaasha qaar ka mid ah Nexus 7 ayaa laga badiyay camal u badan, oo ay bilaabaan cabanaya iyo iyagoo niyad on baraha warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter.
Waa maxay sababta Nexus 7 ka mid ahayn waqtigan? Waa u badan tahay sababtoo ah Google helay cayayaanka ah gudaha KitKat dhisayo asalka. Nexus Android updates Previous ayaa aad u buggy. Google laga yaabaa in weli shaqo adag si loo hubiyo in update kama buggy. Haddii tani ay tahay dhab ah, waxaa weli ay mudantahay sugidda waxay ku.
Si kastaba ha ahaatee, ku Android 4.4 KitKat u iman doonaan inay milkiilaha kasta oo Nexus 7 ka hor updates ee Galaxy S4, Ogow Galaxy 3 ah iyo in ka badan.
Marka u Nexus 7?
Google ku dhawaaqay Android 4.4 update KitKat qalabka Nexus ay website. Waxa aan u baran karo waxaa laga KitKat u soo iman doonaan inay Nexus 4, Nexus 7 iyo Nexus ugu horeysay 10, marka laga reebo Nexus 5. Waxaa ma aysan sheegin taariikhda gaarka ah ee update ah. Laakiin haddii wararkaasi waa sax, rajaynaynaa in aynu u heli kartaa todobaadkan.
La xiriira in KitKat (Android 4.4)
Waxaa sidoo kale jira macluumaad kale oo la xiriira KitKat ugu dambeeyay, oo aad ka heli karto si ay u ogaadaan inta lagu jiro sugida ku. Waa Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) , Android software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee, awood u in aad ka bogsato tirtiray xiriirada, fariimaha, sawiro, videos, audio iyo dokumentiyo badan oo telefoonada Android iyo kiniiniyada. Meesha ugu weyn oo ah in aadan u baahan tahay in aad leedahay xirfad farsamo kasta oo marka aad u isticmaasho. Waxaa gebi ahaanba user saaxiibtinimo oo weyn oo loogu talagalay dadka qaba khasaaro xog ku saabsan qalabka ay Android ah.
Android ka soo kabsado Khasaaray Files : Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sidaad u soo kabsado fariimaha, xiriirada, sawiro, video iyo in ka badan ka Android. Ladnaansho Photos ka Nexus 7 : Raac hagahan inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Nexus 7. ​​Waa muhiim tallaabo-tallaabo . tutorial Ladnaansho Videos ka Nexus 7 : Maqaalkani waxa uu ku tusaysaa sida inuu ka soo kabsado videos on Nexus 7 ee 3 tallaabo, oo halkaas waxaad ka heli kartaa version ah tijaabo lacag la'aan ah. Ladnaansho Photos ka Nexus 4 : Hubi this article in ay bartaan sida inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Nexus a 4. Ladnaansho Faylal ay ka Galaxy Nexus : Tilmaan-bixiyahan waxa uu kuu sheegayaa sida inuu ka soo kabsado xiriirada, SMS, sawir, video, audio iyo waraaqaha ka Galaxy Nexus in 3 tallaabo. ka Nexus S Ladnaansho Data : Read this article oo daba inuu ka soo kabsado sawiro, fariimaha, xiriirada, videos, iyo in ka badan ka Nexus S. Samsung Galaxy Note Data Recovery : Raac tilmaamaadkan soo buugan inuu ka soo kabsado xogta tirtiray ka Samsung Galaxy Note.